Maqaalka Jilian Woods ee Martech Zone |
Maqaallada by Jilian Woods
Jilian Woods waa suxufiyad madaxbanaan iyo qoraa wax ku biirisa oo leh in kabadan laba sano oo khibrad qoris ah. Qoraa ahaan, waxay u aragtaa ujeedkeeda soo saarista iyo la wadaagida waxyaabaha ku habboon dadka doonaya inay wax cusub bartaan. Marka laga reebo shaqadeeda maalinlaha ah, waxaad heli kartaa Jilian oo ku hawlan iskaa wax u qabso ama samaynta yoga.
Jimco, Febraayo 1, 2019 Axad, Febraayo 3, 2019 Jilian Woods
Waxay umuuqataa wax layaableh in, markay tahay 2019, shirkado badan aysan isticmaaleynin ujeedooyin xog ah oo ay ku wadaan howlaha iibkooda iyo suuqgeynta. Xaqiiqda in dad aad u tiro yar weligood qodeen si qoto dheer si ay u kashifaan tilmaamaha ugu fiican ee suurtogalka ah ayaa adiga iyo shirkaddaada ka dhigeysa faa'iido la go'aansaday. Maanta, waxaan jeclaan lahayn inaan eegno dhowr dhinacyo ah ujeedooyinka xogta iyo waxa ay u qaban karto iibka mustaqbalka iyo xeeladaha suuqgeynta. Waan baari doonnaa dhammaan